Ulawulo lwe Sivuno se Thyme
Umyinge - we toni ngokwe hektare ngonyaka
Okuncinci: iitoni ezine (4) ezisandula kukhiwa, itoni enye eyomileyo, i-oli ezingama 30 weelitha.
Okuphakathi: iitoni ezilishumi ezisandula kukhiwa, iitoni ezimbini ezomeleleyo, ama 60 we litre ze oli.
Okuninzi: iitoni ezingamashumi amabini (20) ezintsha, iitoni ezine nangaphezulu (4+) ezomileyo, iilitya ze oli ezingama 150+ nangaphezulu.
Ukuvuna ithyme kwenziwa ngesandla nango matshini kuxhomekeke kubuninzi bentsimi kwimveliso ezincinci nakwizindlu eziluhlaza, kuvunwa ngesandla.
Isivuno esitsha: qala ukuvuna kwakusasa xa izinga lobushushu lisephantsi. Ukuvuna amagqabi amatsha kungaqala kwiveki elishumi elinesibini (12) emveni kokutyala izithole ze thyme.
Isivuno esomileyo: kwimveliso eyomileyo ye thyme, ingaqala ukusikwa ngokukhawuleza xa sele inamagqabi onele ukuvunwa. Uninzi lokukhula kwemifuno luyanqunyulwa phambi kokuba zidubule, xa i-oli sele yomelele namazinga okomelela ephezulu. Okunqunyuliweyo kuyomiswa kubushushu obungama 32℃. Ungasebenzisi umoya owomisayo ongapha kwama 36℃ kuba kungenza i-oli eyomaleleyo iphume kwi thyme, kananjalo nevumba nobumnandi zizakuphela.
Imveliso ye oli esetyenziswayo eluncedo: Ezona oli zingcono zisuka ekuvuneni naseku didiyeleni amagqabi we thyme phambi kokuba abezintyatyambo xa ii-oli kwizityalo sele zomele. Imveliso epheleleyo ingalindeleka ukusuka kunyaka wesibini.
Isivuno esitsha: Emveni kokuvuna, gcina ithyme esentsha kubushushu obungu 4℃. Ithyme ingagcinwa iiveki ezimbini. Ukuvuma apho igcinwa khona kufuneka bube ngapha ko 95% ukuza ingomi. Ithyme esentsha iyaphulukana nencasa efunekayo xa iphekwe ngoku khawuleza, yiyo lonto kungcono ukuthengisa nokusebenzisa ithyme esandula ukunqunqwa ngoku khawuleza.
Imveliso eyomileyo: Amagqabi omisiweyo ayapakishwa kwizi khaftina ezivalekileyo ngoku khawuleza ukuze umbala oluhlaza ugcineke kunye nencasa. Gcina ku 10℃. Ithyme eyomisiweyo ungagcinwa kwizikhenkcezisi iqine kwipakethi ezivaliweyo.
I-Oli ebalulekileyo esetyenziswa: Gcina i-oli ebalulekileyo esebhotileni kwindawo eyomileyo, epholileyo kangangethuba lonyaka ukuya kunyaka onenyanga ezisibhozo emveni kokufakwa ebhotileni. Emveni koku, ii-oli iyaqalisa ukuphulukana nokusebenza kwayo kunye nevumba.
Amagqabi anevumba afana ne thyme ngesiqhelo aye abene nkumbi ezimbalwa kunye nezifo kuba ivumba layo elinamandla ligxotha izinambuzane. Kungcono ke kodwa, ukulandela uhlelo lokukhusela izityalo olinekezwe ngulowo usebenza ngezityalo okanye i-agronomist. Lowo ukufuphi uthengisa iikhemikhali ubanawo amahlelo alungileyo okanye anganikeza ngolwazi ngabacebisi akafumanekayo kwaye abangochwephesha abakufuphi nendawo yemveliso.
Aphids, Snout beetles, Spider Mites, Snails kunye ne whiteflies.
Alternaria, Botrytis, root rot kunye ne rust zezona ngxaki zezifo ezixhaphakileyo.